किशोरी बन्न १२ किलो तौल घटाएँ - कुराकानी - साप्ताहिक
 नीता ढुंगाना, अभिनेत्री
चलचित्र पञ्चायतलाई दर्शकमाझ ल्याउने कार्यमा सक्रिय भएर लागेकी छु । वास्तविक घटनामा आधारित यो चलचित्रबाट मैले धेरै आशा गरेकी छु ।
पञ्चायतसँग कसरी जोडिनु भयो ?
निर्देशक शिवम अधिकारीले झन्डै सात वर्षअघि नै यो चलचित्रको स्क्रिप्ट सुनाउनुभएको थियो । चलचित्रमा मैले १३–१४ वर्षकी किशोरीको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने थियो । मैले त्यही उमेरको नयाँ कलाकार खोज्न आग्रह गरेर म आफ्नै काममा व्यस्त भएँ ।
आफूलाई नसुहाउने भनेर पन्छाएको कथामा पुन: कसरी आबद्ध हुनुभयो त ?
कहिलेकाहिं भाग्यले पनि दह्रो साथ दिने रहेछ । मैले कुनै नयाँ अनुहारका लागि सिफारिस गरेको कथा अन्तत: मेरै भागमा पर्‍यो । झन्डै ६ वर्षसम्म उहाँहरूले नयाँ अनुहार खोज्नुभएछ, तर कतै फेला नपरेपछि पुन: मलाई नै अभिनयको प्रस्ताव राख्नुभयो । त्यसपछि मैले यसपटक नाइँ भन्नै सकिन ।
आफूभन्दा झन्डै आधा उमेरकी किशोरी बन्न गाह्रो भएन ?
कलाकारका लागि सबैभन्दा चुनौतीको कुरा भनेकै यही त हो । आफू जे छ, त्यो भन्दा बिल्कुलै फरक भएर अभिनय गर्न सक्ने कलाकार पो कलाकार । मैले पनि यसलाई चुनौतीकै रूपमा लिएँ, स्विकारें । आजको मितिमा आउँदा म सफल पनि भएँ जस्तो लाग्छ ।
किशोरी बन्नका लागि के–के गर्नुभयो ?
सबैभन्दा पहिला त आफ्नो तौल घटाएँ । ५२–५३ किलोको मेरो शरीरलाई घटाएर ४०–४१ किलोमा झारें । पश्चिम नेपाल (बाग्लुङ) को लवज सिकें । गाउँका किशोरीहरूको आनी–बानी पनि सिकें । छायांकनका लागि बाग्लुङको बलेवा पुगेर स्थानीय बासिन्दाकै घरमा बसें, रहन–सहन सिकें । किशोरी बन्ने सबै तयारी पूरा गरेपछि मात्र क्यामेराको सामु आएँ ।
अभिनय गर्ने क्रममा केही समस्या भयो कि ?
समस्या त कति भयो कति, चलचित्रको मध्यान्तरसम्म म दुब्ली–पातली, सानी छु । मध्यान्तरपछि पुन: १०–१२ किलो तौल बढाउनुपर्ने भूमिकामा छु । एउटै चलचित्रमा विभिन्न उमेर समूहको भूमिका निर्वाह गर्दा अप्ठ्यारो त हुन्छ नै ।
त्यहि मेहनतले अन्तर्राष्ट्रिय सफलता दिलाएको हो त ?
मलाई त्यस्तै लाग्छ । विश्वभरीबाट आएका नयाँ अवधारणासहित निर्माण भएका चलचित्रहरूको उक्त महोत्सवमा मैले पञ्चायत चलचित्रका लागि सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीको एवार्ड जितेकी हुँ । अमेरिकामा सम्पन्न सनफ्रान्सिस्को इन्टरनेसनल न्यू कन्सेप्ट फिल्म फेस्टिभलको विदेशी चलचित्र विधातर्फ सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीको एवार्ड जित्न सफल भएकी हुँ ।
अहिलेसम्म चलचित्र हेर्ने दर्शकबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
चलचित्रको सार्वजनिक प्रदर्शन नभएकाले आम दर्शकको प्रतिक्रिया बुझ्न बाँकी नै छ, यद्यपि स्वदेश तथा विदेशमा भएका प्रिमियर शो हेर्ने अधिकांशले मेरो अभिनयको प्रसंसा गर्नुभएको छ । नेपालमै समेत विभिन्न राजनीतिक दलहरूका मुख्य नेताहरूले समेत व्यक्तित्व रूपमा मलाई भेटेर अभिनयको प्रशंसा गर्नुभएको छ ।